Bogga ugu weyn / Tilmaamaha qasabada / Sida loo Xulo Qasabada Musqusha
2020 / 11 / 12 QoondayntaTilmaamaha qasabada 6787 0
Musqulaha ku dhex yaal guryaha is-kaashatada ayaa runtii ah meel caan ah. Noocyada qurxinta iyo muuqaal nadiif ah oo af badan ayaa muhiim u ah kaqeybgalayaasha reerka iyo martida si isku mid ah. Waxaa laga yaabaa in shaqada ugu badan ee laadlaadinta iyo xusidda musqusha kasta ay tahay qasabadda musqusha. Keenida biyo nadiif ah oo fudud guriga waa muhiimadda ugu weyn, iyo gobol aad ufiican oo lagu muujiyo kartidaada iyo dhadhankaaga.
Qaabaynta qalabka qasabada ayaa ah bar bilow aad u wanaagsan oo lagu beddelayo ama lagu ridayo qalabka musqusha. Xiriirinta kabayaasha tuubada tuubada iyo tubbada qubeyska ee maareeya qulqulka biyaha iyo heerkulka waxay noqon karaan mid ama kabaalley, waxay kuxirantahay doorashadaada. Tuubbooyinka halbeegga ah ee hal foosto waxay bixiyaan hawl hal gacan oo siman, halka qasabadaha weelka labalaabka leh ay u dabaal dagaan qaab dhismeedka iyo quruxda.
Iftiimintu sidoo kale waa in lagu yeeshaa cabirro gaar ah, eG B. Si ballaaran loo isticmaalay, si ballaadhan loo adeegsaday, oo loogu talagalay moodooyinka laba-lever. Dhaqan ahaan, waxaa lagu dhisi karaa sariirta dusheeda, derbiga, ama dhulka. Qalabka musqusha lagu keydiyo ee biyaha lagu keydiyo ayaa ah tiro sii kordheysa oo loo heli karo naqshadeeyaha moodada deegaanka u janjeedha. Waxaa lagugula taliyay halkan macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan wowow qasabada qasabada.
Mashiinka qasabada ayaa sidoo kale loogu talagalay meelo fara badan oo qasabado ah si kor loogu qaado dhalaalka iyo quruxda laambadda. Dabaqa sare waa garoon tayo leh oo loogu talagalay muujinta hal-abuurka ah wuxuuna la mid yahay qalabka kale ee ku habboon gudaha nadaafadda gaarka ah. Satin jilicsan iyo sagxadaha caadiga ah ee macdanta birta ah waxay abuureysaa jawi lagu buuxin karo qaababka qaab-dhismeedka qasabadda laga soo bilaabo dhaqan-dhaqameedka ilaa casriga iyo farshaxanka dheeriga ah sidii hore.
Qorsheynta alaabta guriga iyo astaamaha waxay gabi ahaanba noqon karaan riyada naqshadeeyaha moodada guryaha. Noocyada iyo dusha sare ee qalabka musqusha ayaa si fudud loogu dhex qasan karaa meelaha wax lagu dhaqo, saxammada, nalalka, qalabka qubeyska iyo kuwa lagu daro, taarikada derbiga, tuwaallada gogosha, iyo goonnada.
Qaybta ugu muhiimsan ee lagama maarmaanka ah inta go'aan laga gaarayo qasabadda waa sumcadda iyo isku halaynta ururka sameeya qasabadahaaga. Shirkad sax ah waxay bixisaa tilmaamo rakibid fudud, dammaanad weynna ah caawimaad alaab aan caadi ahayn. Qasabadaha raadinta weyn ayaa loo baahan yahay in la dhiso si ay u waaraan una aqbalaan isticmaalka culus ee qoyska. Qaab-dhismeedka caadiga ama midka geeska, suuliga tayada sare leh wuxuu bixiyaa sannado badan oo taxaddar la'aan ah, wuxuu diidaa daxalka, waana ku faraxsanahay adiga iyo martidaada.
Iyada oo ay jiraan qasabado fara badan oo aan caadi ahayn gudaha hoyga, waa nadiif in lagu qaldo tiro iyaga ka mid ah. Musqusha lafteeda, waxaa laga yaabaa inaad ku haysato tuubbo iyo qalabka qubeyska, qasabadaha saxanka iyo xirmooyinka bidetka. Waxa kale oo jira noocyo gaar ah oo qasabado ah, iyadoo ku xidhan nooca saxanka aad haysato.
Tuubbo Sink ah
Tuubadaani waa tan ugu weyn ee muhiimka ah ee la qabsan karo iyadoo ay ugu wacan tahay xaqiiqda musqusha oo dhami ay leedahay mid. Hadday ahaan lahayd uun qashin-qubka yar ama musqusha weyn ee qaaliga ah, waxaa jiri kara qasabad biyo-mareen ah. Markii aad iibsaneysid saxanka weelka lagu dhaqo, waxaa lagama maarmaan ah in marka hore la xasuusto nooca saxanka.
Dhaqidda xididdada dhiiggu waxay u baahan tahay qasabad gaar ah. Markab biyo raacintu waxay u egtahay baaquli ama weel taagan miiska dushiisa. Taabo qasabadda weelka waxay u rajeyneysaa qulqulo sare iyada oo ujeedadu tahay helitaanka saxanka si fudud. Foomkan waaskada sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa moodel derbi. Libiqsiinta godadka tuubada ee horay loo qoday waxay sidoo kale bixisaa tilmaan aad u fiican oo ku habboon waxa qolkaaga ku habboon, waana inaad iibsataa natiijo ahaan.
Skin-ka ayaa laga yaabaa in horay loogu qoday qasabado labo ah ama hal gacan ah. Nidaamka casriga ee musqusha ee ku habboon godadka laga galo musqulaha waa 4 inji oo isu jira, in kasta oo xaqiiqda ah in cabirrada qaarkood ay noqon karaan illaa siddeed inji oo leh cabbirka sii kordhaya. Sinks badanaa waxay bixiyaan qasabadaha ugu badan ee qurxinta ee qashinka oo dhan, sidaas darteed waa suurtagal-qiimeyn koowaad oo lagu ogaanayo moodadaada.
Qubeyska iyo qalabka musqusha
Tani waa gobol kale oo musqushaada ka mid ah halkaasoo godadka horay loo qoday ay xulashada kuu sameyn karaan. Haddii aad daloolisay godadka qasabadda qasabadda lagu maydho, waxaad u baahan kartaa inaad meesha ka saarto adeegsiga tuubada hal-dhaafsiisan mooyee haddii aad u baahato inaad si fiican u nuqul ka sameysid foornada. Mid ka mid ah qalabka ugu qubeyska badan ee qubeyska iyo musqusha waa hal gacan oo keliya, maaddaama ay isku hagaajiso culeyska iyo kuleylka hal dhaqdhaqaaq. Marka ay guriga ku jiraan dhalinyaro, qalliinka ayaa tan uga dhib yar marka loo eego qaababka dhaqanka ee leh laba gacmood.
Guryaha leh hawo-mareenka ama tubbada hawada, waxaa jira qasabado u gaar ah oo isku koobaya hal gacan oo labo jeerna ku daryeela kala duwanaanshaha. Xitaa waxaad geyn kartaa tuubada biyaha si aad ugu nasato qaab cajiib ah. Qalabka qubeyska iyo musqusha waxaa lagu iibsan karaa dusha sare iyo qaabeynta oo qaabeysa inta ka hartay musqushaada muuqaal guud oo isku xiran.
Mashiinnada 'Bidet' ayaa sidoo kale lagu bixin karaa kala duwanaansho aad u weyn oo leh laba gacmeed ama moodal leh hal gacan. Marka aad wax u iibsaneyso bidet-kaaga, waxaa muhiim ah in la ogaado inta god ee la qoday iyo nooca qasabada loo baahan yahay. Haddii aad aqoonsatid haddii aad rabto moodel leh hal ama gacan, waxaad dooran kartaa nooc ku habboon qurxintaada iyo dhammeystirka.
Iyadoo aan loo eegin nooca qasabad ee aad dooratay inaad isticmaasho, waa inaad sameysaa cilmi baaris taxaddar leh oo aad dib u xasuusataa xirfad iyo farsamo wanaagsan. Waxaad si dhab ah ula kulmi doontaa tubadaada sanado badan oo aadan soo soconin.
Hore:: Fikradaha ugu sarreeya ee dib-u-habeynta musqusha ee miisaaniyadda Next: Sida Loogu Soo Xulo Qasabada Musqushaada